Xaalada dhaawacyada Real Madrid oo sii xumaaneysa – Gool FM
Xaalada dhaawacyada Real Madrid oo sii xumaaneysa
Byare September 22, 2017
(Madrid) 22 Sebt 2017. Waxaa la warinayaa in xaalada dhaawacyada Real Madrid ay sii xumaaneyso kaddib markii uu Toni Kroos ka baxay tababarkii ugu dambeeyay ay kooxda isugu diyaarineysay kulanka sabtida ee Alaves.
Karim Benzema, Theo Hernandez, Marcelo, Mateo Kovacic iyo Jesus Vallejo ayaa lagu waday inay seegaan safarka ay Los Blancos ku gaareyso Mendizorrotza sababo dhaawac, balse iminka Zidane ayay sidoo kale u badan tahay inuu wajihi doono Alaves iyadoo uu ka maqan yahay xiddiga reer Germany.
Waxaa la aaminsan yahay in 27 jirka kubbad qaabeeyaha ah uu dhaawacmay intii lagu guda jiray kulankii Real Sociedad isla markaana kulanka looga reebay ka hor tag ahaan.
Inkastoo ay jirto inaysan weli warbixin ka soo bixin kooxda, cabsi hore oo laga qabo ayaa waxay soo jeedinayaan in laacibka ku guuleystay koobka adduunka uu dhibaatada dhaawaca soo cusbooneysiyay intii lagu guda jiray kulankii Betis.
Marcos Llorente ama Dani Ceballos ayaa la filayaa in midkood lagu soo buuxiyo booska Kroos.
SAWIRRO: Diego Costa oo u soo duulaya Spain si uu tijaabada caafimaad ugu maro….
Asensio, Dele Alli, Mbappe…(Waa kee da’yarka ugu fiican adduunka???)